सुरज वैद्य | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता सुरज वैद्य
”नेउवा महासङ्घको विधान पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ”
विगत २५ वर्षेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विभिन्न पदमा क्रियाशील रहँदै आएका सुरज वैद्य सङ्घको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । तीन कार्यकालसम्म उपाध्यक्षको पद समाली सकेका वैद्य पछिल्लो समयमा महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षका हैसियतले कार्य गर्दै आएका छन् । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा देखिँदै आएका समस्या सुल्झाउन महासङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने विश्वास राख्ने वैद्यसँग उनको चुनावी मुद्दा र मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सारः
निर्वाचनको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले यस अवसरमा मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्ने अवसर पाएँ । दुर्गम जिल्लाहरूका वास्तविक स्थिति बुझ्नसमेत यसले मलाई मद्दत पुर्‍यायो । नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा कहाँबाट विकासको शुरुआत गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि मैले साथीहरूबाट पाएको छु । उद्योग वाणिज्य महासङ्घले के गर्नुपर्छ ? यसअघि कहाँ कमजोरी भए ? यी यावत् कुराहरूको सुझाव पाएको छु । यसबाट मलाई भविष्यको कार्ययोजना निर्माणमा सजिलो भएको छ । अहिलेको महासङ्घको नेतृत्व लिनेका निम्ति चुनौतीहरू धेरै छन् । आज म जसरी देशभरिका उद्योगी व्यवसायी साथीहरूसँग भेटघाट र छलफल गरिरहेको छु, त्यसले भोलिको निम्ति मलाई सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु ।
उम्मेदवारी घोषणाका निम्ति सुदूरपश्चिम पुग्नुको कारण के हो ?
नेपालमा जुन खालको द्वन्द्व भयो त्यो खासमा सुदूर र मध्यपश्चिमको आर्थिक विकास हुन नसकेर नै भएको हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ । जबसम्म सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा आर्थिक उन्नति हुँदैन तबसम्म देशमा पूर्ण शान्ति सम्भव हुँदैन । आर्थिक उन्नतिका निम्ति लगानी आवश्यक हुन्छ । यही दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर भोलिका दिनमा त्यो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने मेरो योजना हो । त्यसैलाई पूर्णता दिनका निम्ति मैले सुदूर पश्चिमबाट उम्मेदवारीको घोषणा गरेको हुँ । अझ मेरो विचार त उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनका निम्ति जाजरकोट वा डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गरौं भन्ने हो । अहिलेसम्म महासङ्घमा जति पनि नेतृत्व आए ती सबै सुगम क्षेत्रबाटै प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । मैले त्यो परम्परालाई तोडेर दुर्गमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सोच बनाएको छु ।
तपाई सुदूर र मध्यपश्चिम बलियो बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ । तर वाग्मती अञ्चल तपाईंको विपक्षमा जाँदै छ भनिँदैछ ?
वाग्मती अञ्चलको भोटिङ प्यार्टनलाई हेर्ने हो भने त्यसलाई ‘कम्युनल’ भोटिङ पनि भन्न सकिन्छ । हिजो पनि हामीले त्यो देख्दै आएका हौं । म कम्युनल सोचले मुलुकको आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन भन्ने सोचाइ राख्ने मानिस हुँ । महासङ्घले जात-जाति धर्मभन्दा पनि उद्योग व्यवसायलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ । अघि मैले भर्खरै वाग्मतीका सबै जिल्लाका साथीहरूलाई भेटेको छु, उहाँहरूको विचार बुझेको छु, यहाँका बहुमत साथीहरूको समर्थन त मलाई नै छ ।
कार्य योजना के छन् ? कि यो भावनात्मक कुरा मात्रै हो ?
मुलुकमा समावेशी ढङ्गको विकास हुन नसकेको कारणले नै सुदूर र मध्यपश्चिमको विकास हुन नसकेको हो भन्नेमा कसैको पनि दुइमत छैन । नेपालको सन्दर्भमा निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ । यो असन्तुलनले भोलिका दिनमा नेपालको आर्थिक स्थिति कति भयानक बन्ने हो भन्न सक्ने स्थिति छैन । सुदूर पश्चिमका सम्भावनाहरू पहिल्याउन र त्यसको अध्ययन गर्न उद्योग वाणिज्य महासङ्घले केही रकमसमेत छुट्टयाएको छ । हामी विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्कलगायत संस्थासँग मिलेर सुदूर पश्चिमको सम्भावनाका बारेमा खोजी र लगानी गर्नेछौं । त्यस्तो खोजी काठमाडौंका पाँचतारे होटेलमा बसेर होइन सुदूर र मध्यपश्चिममै गएर गरिनेछ । स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई हामी आमन्त्रित गर्नेछौं । त्यो वातावरण बनाउन हामी सरकारसँग पनि कुरा गर्नेछौं । मलाई विश्वास छ, यसपछि अवश्य पनि केही न केही हुनेछ ।
तपाईंको चुनावी मुद्दा चाहिँ के के हुन् ?
महासङ्घको निर्वाचनमा मेरा मुख्यतः ६ ओटा मुद्दा छन् । सबैभन्दा पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यशैलीमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । हामी मुलुकको राजनीतिमा सुधार हुनुपर्ने कुरा गर्र्छौं । तर, त्यस्तो सुधारको थालनी आफूबाटै शुरू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अध्यक्षमुखी बन्दै आएको महासङ्घलाई अब संयुक्त नेतृत्वअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेतृत्व भनेको मुद्दाले पनि जन्माउने कुरा हो । महासङ्घको अध्यक्ष यसअघि राजासँग घुम्थ्यो, या राष्ट्रपतिसँग वा प्रधानमन्त्रीसँग घुम्ने गथ्र्यो । तर, अब महासङ्घको अध्यक्षले विषयगत नेतासँग मुद्दालाई लिएर हिड्नुपर्छ ।
दोस्रो अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिक अर्थतन्त्रमा हामी पछि परेका छौं । सरकार परिवर्तन हुँदै आएका कारणले हामीकहाँ अर्थतन्त्रको स्पष्ट खाका निर्माण हुन सकेको छैन । दलगत दृष्टिकोण र विभाजित राजनीतिक विचारले यहाँ आर्थिक मुद्दालाई ओझेलमा पारेको छ । स्थिर सरकार नहुँदा अर्थनीति निरन्तर प्रभावित बनेको छ । नयाँ नेतृत्व चुनिएपछि अब निजी क्षेत्रको आफ्नै ‘भिजन’ हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रले त्यो ‘भिजनलाई नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । ६ महीना भित्रमा निजी क्षेत्रको तीनवर्षको र पाँचवर्षको आर्थिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । त्यो कार्ययोजनालाई मुलुकका विभिन्न राजनीति दलका नेतृत्व समक्ष राखेर छलफल गरी त्यसलाई उहाँहरूको पनि मुद्दा साझा बनाउनुपर्छ । भविष्यमा जस्तो सरकार आए पनि हामीले तयार पारेको यस्तो संयुक्त आर्थिक मुद्दालाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो योजना छ । निजी-सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणाबाट मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति महासङ्घले अत्यन्तै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
तेस्रो मुद्दामा मैले नेपालको ऊर्जा समस्यालाई लिएको छु । ऊर्जा समस्या समाधान नभई विकास निर्माण र उद्योगधन्दाको कुनै पनि काम हुन सक्दैन । ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । ठूला परियोजना बनाउने मात्र होइन लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन पनि हामी कार्य गर्र्छौ । विगत २ वर्षदेखि थन्किएर बसेको विद्युत्सम्बन्धी विधेयक चाँडोभन्दा परित हुनुपर्छ । मेरो नेतृत्वको महासङ्घ लगानी खोज्नेदेखि विद्युत् उत्पादनसम्ममा क्रियाशील हुनेछ । लगानीकर्ता र स्थानीय जनता मिलेर ऊर्जा उत्पादनमा लाग्ने हो भने २/४ वर्षभित्रै मुलुक लोडशेडिङ मुक्त हुनसक्छ । यो काम महासङ्घले पहिलेनै गर्नुपर्ने थियो । लगानीकर्ता र स्थानीय जनताबीच महासङ्घले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर ऊर्जा उत्पादनलाई गति दिने मेरो योजना छ । तर, सरकारले यो क्षेत्रमा केही समयका लागि विशेष छूट र सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जबसम्म ऊर्जा उत्पादनमा सरकारले सहुलियत दिँदैन तबसम्म अपेक्षित लगानी भित्रने कुरामा धेरै शङ्का छ । हिजोका दिनमा ९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर जलविद्युत्मा लगानी गर्दा त्यो नाफामुखी थियो । तर, आज ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । निर्माण लागतमा पनि त्यही किसिमले वृद्धि भएको छ । त्यसैले सरलढङ्गबाट यसमा लगानी आउन धेरै मुस्किल छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै न कुनै सहुलियत दिने नीति लिनुपर्छ । महासङ्घले त्यसमा लविङ गरेर लगानी भित्र्याउनेछ । यसमा अर्को पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मनोमानीले जुन नोक्सान भइरहेको छ त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै प्राधिकरणको भूमिकाको पनि पुनःमूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । कमजोर बन्दै गएको प्राधिकरणलाई ऊर्जा क्षेत्रमा एकलौटी भूमिका नदिई ऊर्जा विकास गर्ने एउटा निकायका रूपमा मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।
औद्योगिक क्षेत्र र ट्रेडयुनियनका बीचमा भइरहने द्वन्द्व समाप्ति मेरो चौथो मुद्दा हुनेछ । जबसम्म हामी ट्रेड युनियनसँग साझेदारका रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौं तबसम्म भोलिको नेपालमा स्वदेशी र विदेशी कुनै पनि लगानी हुन सक्दैन । ट्रेड युनियनसँग हामी दुइ मुद्दामा छलफल गर्न चाहन्छौ । पहिलो पारिश्रमिकको कुरा हो । ट्रेड युनियन जहिले पनि पारिश्रमिक बढाउने कुरा गर्छन । तर, उद्योगपतिहरूले पारिश्रमिकलाई उत्पादकत्वसँग जोडन चाहन्छन् । उत्पादन बढयो भने स्वाभाविक रूपले पारिश्रमिक पनि बढ्छ । यो मुद्दामा ट्रेड युनियनका साथीहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने काम गर्ने मानिसलाई टेवा दिने र नगर्नेलाई संरक्षण नगर्ने नीति लिनुपर्‍र्यो । पारिश्रमिकसँगै काम पनि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरालाई सँगसँगै मनन गर्नुपर्‍यो । तर, अहिले ठीक उल्टो भइरहेको छ । कामको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि बढाइएको अवस्था छ । त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग हामीले यो कुरा राखिसकेका छौं । थप कुरा कामदारको सामाजिक सुरक्षाप्रति औद्योगिक प्रतिष्ठानले निश्चित रूपले ध्यान दिनुपर्छ । तर, सँगसँगै लगानी सुरक्षाको कुरालाई बिर्सिएर एकातर्फी कुरा हुन सक्दैन । सरकार र ट्रेड युनियनले औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई लचकतासहितको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
भ्रष्टाचारलाई मैले पाँचौं मुद्दा बनाएको छु । उद्योग वाणिज्य महासङ्घले केही अगाडि आफैले एउटा आचारसंहिता बनाएको थियो । निजी क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा जुन आरोप छ त्यसमा मेरो विल्कुलै असहमति छ । केही समय पहिले मात्र ट्रान्स्परेन्सी इण्टरनेशनलले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले पनि नेपाललाई भ्रष्ट राज्यहरूको अग्र सूचीमै राखेको थियो । यसले त अन्तरराष्ट्रियस्तरमै नेपालको बदनाम गरेको छ । नेपालमा लगानी भित्र्याउन यसले पनि ठूलो बाधा पुर्‍याएको छ । योसँगै विगत ३ वर्षदेखि लगातार समयमा बजेट नआएर जिल्ला जिल्लामा जुन प्रकारको विकास हुनुपर्ने हो त्यो विकास हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखि आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महीनामा बजेट खर्च गर्ने परम्परा बन्दै आएको छ, त्यो राष्ट्रका लागि अत्यन्तै खराब कुरा हो । समयमा बजेट आउनुपर्‍यो, समयमा काम हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि महासङ्घले पनि पहल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
छिमेकी मुलुकहरूसँगको आर्थिक सम्बन्धको विषय मेरो छैटौ मुद्दा रहेको छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दै भारत र चीनलाई हामीले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगी बनाउनै पर्छ । हामीले यो विषयलाई जति पर धकेल्दै जान्छौ त्यति नै नेपालको विकासमा बाधा अड्चन आउनेछन् । यसको मतलब के हो भने नेपालमा बढीभन्दा बढी भारत र चीनको लगानी भित्र्याउनुपर्‍यो । यी दुवै मुलुकमा नेपालले प्रशस्त मात्रामा वस्तु निर्यात गर्न सक्नुपर्‍यो । यसका निम्ति मेरो नेतृत्वको उद्योग वाणिज्यसङ्घले भारतीय र चीनका समकक्षी उद्यमी व्यवसायीका छाता सङ्गठनहरूसँग मिलेर काम गर्नेछ । भारत र चीनको प्रशस्त लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारले पनि केही न केही आकर्षण त पैदा गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसका निम्ति पनि महासङ्घले सरकारलाई उपयुक्त कदम चाल्न लगाउन विशेष पहल गर्नेछ ।
महासङ्घलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने कुनै योजना छ कि ?
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ विशुद्ध लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चल्ने संस्था हो । यो निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन भएकाले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको हकहितका निम्ति काम गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो । राजनीतिक स्थिरताका निम्ति समयमै संविधान निर्माण हुनु आज मुलुकको पहिलो आवश्यकता हो । यस कार्यमा महासङ्घले सरकार वा संविधान सभालाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । आर्थिक मुद्दामा नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायत संस्थाहरूसँग पनि हामीले मिलेर काम गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि महासङ्घ सदैव तयार रहनुपर्छ । ससाना मुद्दामा हामी अल्झिएर बस्यौं भने ठूलाठूला मुद्दामा पक्कै पनि पछि पर्नेछौं । त्यसैले सबैले सबैसँग मिलेर काम गर्नुको अब कुनै विकल्प छैन ।
चुनाव जित्ने आशामा हुनुहुन्छ ?
चुनाव हार्नु र जित्नु पटक्कै महत्त्वपूर्ण होइन । तर यो चुनावमार्फत म कुनै राजनीतिमा होइन मुलुकको आर्थिक उन्नतिको लडाइमा संलग्न भइरहेको भन्ने कुरा देखाउन चाहन्छु । मुलुकको आर्थिक उन्नतिका निम्ति म कुनै पनि मुद्दामा फलदायी बहस गर्न तयार छु । उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा चल्ने संस्था हो । यहाँ अनेक मुद्दाहरू उठिरहेका छन् । तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको मुलुकको आर्थिक भविष्य नै हो । नेपालमा ठूलो लगानीको खाँचो छ । त्यसका निम्ति शान्ति र स्थिर राजनीति पनि त्यत्तिकै आवश्यक कुरा हो । मैले स्पष्ट भनेको छु, म नेपालमा लगानी भित्र्याउन सक्छु, सरकारले त्यसको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । मलाई विश्वास छ, मैले चुनाव जित्छु । त्यसै पनि मेरो उम्मेदवारी विशुद्ध पदका लागि नभएर नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि हो । सबै साथीले यो कुरा बुझ्नुभएको छ ।
नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिवेश अर्थात् भविष्यको सङ्घीय राज्यमा तपाईंले नेतृत्व गर्ने सङ्घको संरचना कस्तो होला ?
यो वास्तवमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । जिल्ला भ्रमणको अवसरमा मैले साथीहरूसँग यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने गरेको छु । नयाँ संविधान निर्माणसँगै उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधानमा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय राज्यको प्रादुभावपछि कुन अञ्चल, जिल्ला कहाँ पर्छ त्यसको त्यसको अहिल्यै अनुमान गर्न कठिन छ । सङ्घीय नेपालमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको भूमिका कस्तो हुने, राज्य राज्यमा यसको सङ्गठनको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने कुरामा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । तर, अहिलेदेखि नै महासङ्घलाई समावेशी रूपले गठन गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा भने हामी स्पष्ट छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन सँगै उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति हामी तयार छौं ।